China China fashion ipholiyesta emgangathweni deck sasemini mveliso kunye nabenzi | Ipikvalue
Le bhegi ipholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini kunye nomtya wegxalaba yinto yakudala kwaye iyathengisa kakhulu. Olu luyilo lwale ngxowa ipholileyo igqunyiwe ilulungele kakhulu ulwandle kunye nangaphandle. Elona gumbi liphambili lebhegi epholileyo egqunyiweyo imalunga ne-4L. Kwanele ukugcina ibhokisi yesidlo saseminikunye nezinye iziqhamo. Ibhegi epholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / uxande wesidlo sasemini ikwindawo yokungena manzi. Xa ukuvalwa uziphu kunye umtya shouler, ibhegi kupholile / 6 ingaba ibhegi kupholile / yoxande ibhegi sasemini kulula ukuqhuba. Ungaqinisekisa konke ukutya okanye isiselo esikhuselekileyo sikhuselekile kwaye sikhuselekile ekuhambeni. Izinto zangaphandle zobhaka opholileyo yi-420D ipholiyesta oxford okanye ipholiyesta yesibini yeethoni ene-PVC eyomeleleyo ehlala ixesha elide. Uninzi lwebhegi yangaphandle yenziwe ngeli laphu le-oxford. Umbala webhegi epholileyo / 6 unengxowa epholileyo / uxande wesidlo sasemini unokuba yi-PEVA emhlophe, i-PEVA engwevu okanye ifoyile yealuminium ekhuselekileyo kunxibelelwano lokutya kunye nokucoca ngokulula ngelaphu elimanzi. Kukhulu ngokwaneleyo ukuba ungakukhuphela ukutya uyokusebenza, isikolo njalo njalo. Ungabeka umkhenkce ngaphakathi kwengxowa ebandayo / i-6 inokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini kunye neziselo, iziqhamo ukugcina ixesha elibandayo ixesha elide.